Nampiasaina Hanoherana ny Fanjanahana Ara-Tsaina Mialoha ny Hitsidihan’ny Printsy Harry an’i Karaiba ny Tenirohy #NotMyPrince · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2016 4:38 GMT
Ny Printsy Harry tamin'ny fanokafana ny Lalao Invictus 2014. Saripikan'ny Fiarovana. Mpaka sary : Sergeant Steve Blake RLC. CC BY-NC-ND 2.0
Na dia efa mahaleotena Tamin'ny Fanjakana Mitambatra ampolony taona maro aza aza ny ankamaroan'ny zaratany Karaiba — ary ny sasany amin'ireny efa mihoatra ny 50 taona — dia mbola manana herim-panintonana hafahafa amin'ireo nozanahiny taloha ilay ilay reny nanjanaka.
Manaraka ny rafitra ara-politika sy ara-pitsarana any amin'ny Fanjakana Mitambatra hatrany ny ankamaroan'ireo zaratany ao amin'ny faritra, mbola mpikambana ao amin'ny Commonwealth. Ny Cricket, ohatra, dia fanatanjahantena malaza tokoa. Amin'ny ilany ankavian'ny arabe ny olona no mandeha, manome lanja kokoa amin'ny fitenenana “the Queen's English” [teny anglisy ara-drafitra] ny olona amin'ny ankapobeny mora voasariky ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny mpanjaka, izany no mahatonga ny fisian'ny fiantanentanana manodidina ny fanantomotry ny fitsidihan'ny Printsy Harry ao Karaiba — afa-tsy ny fahatongavany ho tenirohy malaza.
Ao amin'ny Twitter, ny #NotMyPrince [tsy printsiko] tenany dia efa manambara “komity miady amin'ny fanjanahantany handray ny Printsy Harry […] mijoro hanohitra ny fanjanahantsaina an'i Karaiba”. Ny tanjona, araka ny hita ao amin'ny Tumblr-n'ny tetikasa, dia miorina eo amin'ny “famahana ny fatotry ny ampira”.
Ny fitetezan-tanin'ny printsy dia nokasaina hatomboka tao Antigua tamin'ny 20 Novambra 2016. Ao anatin'ny tapabolana izy no hitsidika ihany koa an'i St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent ary Grenadines, Grenada, Guyana sy Barbados, izay iheverana fa hiaonany amin'i Rihanna kintana malaza teraka tao Barbados.
Mahita izany rehetra izany ho fanesoana i Nalini Mohabir, iray amin'ireo mpamorona votoaty #NotMyPrince. Namoaka sioka maro miaraka amin'ny tenirohy izy hisarihana ny mpisera media sosialy hafa hifanakalo hevitra momba ny fanjanahanatany sy ny mari-panondroana karaibeana:
Mitsidika an'i Guyana (ahitana mponina taranaka Aziatika atsimo mihoatra ny 40%) ny printsy Harry izay nampiasa ompa ara-poko miaramila iray ( niantso azy ho Paki)
Tamin'ny taona 2009, nisy lahatsary iray nahitana ny Printsy Harry nifananihany tamin'ny mpiray vondrona ara-miaramila aminy ao Sandhurst, ka ny iray amin'ireo nolazainy ho “ny namantsika Paki kely”. Nisy ny fahatezerana nivoaka tamin'ity voambolana manivaka nampiasainy ity, na dia mety ho tsy nihevitra ny teny ho ompa aza ny printsy.
Tamin'ny taona 2015, nanambara i Freundel Stuart, praiminisitr'i Barbados, fa alohan'ny Novambra 2016, tiany ny hamadika an'i “little England” [Angletera kely] — ilay firenena hita ho nanjanaka indrindra tamin'ireo tangoronosy — ho repoblika, hanoloan'ny filohan-danonana ny toeran'ny Mpanjakavavy, io filoha io no filoham-panjakana. Mety ho nieritreritra an'io teny io angamba i Mohabir raha nanontany izy hoe:
Nahoana no tsy maintsy ilain'ny 👑 ny hanana anjara toerana saimbôlika, ara-danonana na ara-dalampanorenana aty amin'ny karaiban'ny taonjato faha-21?
Raha nampiasa fiteny manaisotra ny fanjanahantany ny praiminisitra Stuart, dia hita kosa fa tsy manakaiky amin'ny fametrahana filoha hanolo ny toeran'ny mpanjakavavy mihitsy ny firenena, mahatonga ny #NotMyPrince hiresaka ilay lohahevitra.
Mbola tsy hita ny repoblika
Nihahaingana avy eo ny resaka, raha nisioka ny gazetiboly an-tserasera britanika Consented:
Mitabataba fanavakavahana ny Printsy Harry sy ny ao an-dapa, na dia nisitraka ny roba avy amin'ny olona tsy fotsy hoditra nozanahana nandritra ny taonjato maro aza
Nandà tsy hiditra amin'ny mety ho fifampiresahana amin'ny fanonerana amin'ny varotra andevo niampita ny ranomasina Atlantika tao amin'ny faritra ny Fanjakana Mitambatra.
Tamin'ny fanatsongàna ny teny nataon'ireo Indiana Tandrefana maro — hatramin'ireo filoha teo aloha ka hatramin'ny mpanoratra maro — dia mailaka ny #NotMyPrince nametraka fa tsy fanoratan-tantra vavao tsy akory izy ity; ary efa ampolony taona maro ny vahoaka karaibeana no nihira izany hira izany:
Ellis Clarke miresaka ny fanjanahantany tamin'ny taona 1964
“Tahaka ny tsy mahalala ry zareo fa nety mihitsy anie io fiharian'ny ampira io…” – A Small Place [Toerana kely iray] – Jamaica Kincaid
“Fitohizan-traikefa ara-tsaina ny traikefa ara-panjanahantany…” – George Lamming
Vao hita lohateny an-gazety vao haingana ny Printsy Harry tamin'ny fihaonana tamin'ny mpiantsehatra metisy iray antsoina hoe Meghan Markle. Tao anatin'ny hetsika mbola tsy nataony mihitsy hatrizay, namoaka fanambarana ofisialy mampitandrina ny paparazzi ny tao amin'ny Lapan'i Kensington fa “nisy ny tsipika tsy azo ihoarana voahitsaka” ary notsikerainy ny fomba niresahan'ny media ilay sipan'ny printsy vaovao.
Nampiasa am-pisainana ny tenin'ilay mpiantsehatra ihany ny #NotMyPrince hiresahana ity raharaha ity:
Meghan Markle, sipan'ny printsy: “nanangana ny fanondroana tianao hanondroana ny tenanao ihany ianao, tahaka ny nataon'ny razanay rehefa nomena ny fahafahana ry zareo”
Hita fa misy idiran'ny Satroboninahitra Britanika intsony ny mari-panondroana tian'ny olom-pirenena karaibeana ho azy ireo.